राति सुत्दा मुखबाट अनायसै र्‍याल चुहिनु यी खतरनाक बिमारीको संकेत, तपाईको चुहिन्छ ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / राति सुत्दा मुखबाट अनायसै र्‍याल चुहिनु यी खतरनाक बिमारीको संकेत, तपाईको चुहिन्छ ?
admin January 27, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 84 Views
केही औषधीहरुमा यस्ता तत्वहरु पाइन्छ, जसका कारण मुखबाट र्‍याल निस्कन सक्छ । अल्जाइमरको समस्या भएका व्यक्तिको मुखबाट समेत र्‍याल निस्कन सक्छ
Previous निजामती कर्मचारी, सेना, पुलिस, शिक्षक लगायतलाई खुसीको खवर !
Next वैदेशिक रोजगारीको लागी भिजिट भिसामा जाँदा यो हा’लत हुन होला,बिचार गर्नु